Induna ifuna kudingiswe abafundi 'abadala izinxushunxushu esikoleni' - Ilanga News
Home Izindaba Induna ifuna kudingiswe abafundi ‘abadala izinxushunxushu esikoleni’
Induna ifuna kudingiswe abafundi ‘abadala izinxushunxushu esikoleni’
Kume ukufunda ngoLwesihlanu bephihliza isikole ngamatshe
KUSUKE isixakaxaka, kwamiswa ukufunda ngoLwesihlanu eVelangezwi High School, abafundi bephihliza isikole ngamatshe ngoba bethi kunothisha abangamfuni.
IYAVEVA induna yaseMaqadini, KwaMaphumulo ngesenzo sabafundi baseVelangezwi High School kule ndawo, abasolwa ngokuphihliza isikole ngamatshe ngoLwesihlanu ngoba kunothisha abangamfuni bethi unesandla esiqinile, okuphoqe ukuba abanye othisha baphume ngesamagundane, kwaphazamiseka ukufunda. Laba bafundi kuthiwa bafuna lo thisha axoshwe. Isikole sikhiphe incwadi eyazisa abazali ukuthi kumisiwe ukufunda okwesikhashana, kanti kulindekele ukuba kuqhubeke izingxoxo kuleli sonto. Abafundi okuthiwa bangamashoshozela, kuvela ukuthi akubona abasendaweni, bakhonza ngaphansi kwenye inkosi, kwasezikoleni ababefunda kuzo phambilini, babengamasosha azikhuzayo.
Induna yendawo, uMnu Mhlengani Mkhize, ithi akukho okuzolunga uma umphakathi uzovumela ukuba laba bafundi baqhubeke bafunde kulesi sikole. Itshele ILANGA ukuthi kayisabafuni esigodini, kwazise abaphembi bodlame bayaziwa. “Nakuba ngokwemibiko esiyitholile kuvela ukuthi lo monakalo wenziwe yinqwaba yezingane, kodwa bayaziwa abaphambili kule nto. Belungekho udlame eVelangezwi, izinto ziqale ukonakala ngokuvunyelwa kwezingane zaseMlwandle naseMakhabeleni, ezasuka ezigodini zangakubo sezimoshile ezikoleni zazo, zamukelwa lapha,” kusho uMnu Mkhize.
Uthi lolu daba uzolusingatha nezinhlaka ezifanele emphakathini, okubalwa abazali bezingane ezifunda kulesi sikole. Utshele ILANGA ukuthi ukufa nokuphila kwalesi sikole, kuncike ezinqumeni ezinzima zokuthi kudingiswe laba bafundi okungebona abendawo. Uthi ba ngaphansi kwamanye amakhosi nezinduna. “Lolu dlame olwenzeke esikoleni bengilulindele ngoba ngiyazazi lezi zingane. Besezehlule nasezikoleni ezazifunda kuzo phambilini,” kusho uMnu Mkhize. Ngokuthola kweLANGA, namhlanje ngoMsombuluko kuzoqala kuhlale umhlangano wesigungu sesikole bese ngokuhamba kwesonto, kuhlangane umphakathi. Omunye wabafundi bakulesi sikole, uthe kabasamufuni lo thisha “onesandla esiqinile” ngoba uyathanda ukuzenza umphathi wesikole. “Uma kuke kwenzeka into encane, useyakuxosha uthi hamba ubuye nomzali,” kusho lo mfundi.
Kuthiwa imoto yalo thisha ilinyaziwe kanti ezabanye othisha kazizange zithintwe. Usihlalo wesigungu sesikole, uMnu Ntokozo Shangase, uthe udaba luzoqala ludingidwe esigungwini namhlanje. “Akukho okutheni engikuzwile ngoba uthishanhloko uyikhe phezulu indaba,” kusho UMnu Shangase. UMnu Bhuzenge Hlongwa naye oyilungu lesigungu sesikole, uthe ngokuzwa kwakhe, abafundi bebefuna nezigqoko zabo ezathathwa nguthisha obehlaselwa. “Esikoleni bekugqokwa izigqoko, sakuvala lokho futhi sabatshela othisha ukuthi uma izingane zibahlula, basitshele sikhulume nazo. Kwesinye isikhathi siyafisa ukuzixoxela mathupha nezingane,” kusho uMnu Hlongwa. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe bayakugxeka ukungaziphathi kahle kwabafundi, wathi ukusondela kwabaholi bendawo kungenza umehluko esikoleni.
Previous articleIngcindezi idla buthule kwabaningi
Next articleKugqabuka igoda kuShwi noMtekhala?